Translations by Shubham Joshi in “Nepali (ne) translation of lan...” : Nepali (ne) : Template “language-selector” : Utopic (14.10) : Translations : language-selector package : Ubuntu
Translations by Shubham Joshi
Translations by Shubham Joshi in “Nep...
Shubham Joshi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.
यो सेटिङले आफ्नो डेस्कटप र एप्लिकेसन​​मा प्रदर्शित भाषालाई मात्र​ असर गर्छ। येसले मुद्रा वा मिति ढाँचा सेटिङहरू जस्ता सिस्टम वातावरण सेट गर्दैन​। त्यसका लागि रिजनल फर्म्याट ट्याबमा भ​एको सेटिङ प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ प्रदर्शित मान को क्रमले आफ्नो डेस्कटपका लागि कुन​ अनुवाद प्रयोग गर्ने निर्णय गर्छ​। पहिलो भाषा लागि अनुवाद उपलब्ध छैन भने, यो सूचीमा भ​एको अर्को प्रयास गरिनेछ। यो सूची अन्तिम प्रविष्टि सधैं "अंग्रेजी" छ। "अंग्रेजी" तल हरेक प्रविष्टि उपेक्षा गरिनेछ।
यदि भाषाहरुमा टाइप गर्नुछ जस्को लागि लेटर म्यापिङको सरल कुञ्जी भन्दा बढी जटिल आगत विधिहरू आवश्यक पर्छ भने यो फङ्सन सुचारु गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, तपाईं चिनियाँ, जापानी, कोरियन वा भियतनामी टाइपका लागि यो फङ्सन आवश्यक हुनेछ। उबुन्टु लागि सिफारिश मूल्य "IBus" छ। तपाईं वैकल्पिक इनपुट विधि प्रणाली प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, पहिलो सोही प्याकेजहरू स्थापना गरि त्यसपछि यहाँ इच्छा लागेको सिस्टम छनौट गर्नुहोस्।